January 2, 2021 - ApannPyay Media
ရုံးပတီသီး အစိမ်​းကို အတို့လုပ်ပြီး စားတတ်ရင် ဒီပို့ကို (လုံးဝ) ကျော်မသွားပါနဲ့ အရေးကြီးလို့ပါ
February 1, 2021 January 2, 2021 by ApannPyay Media
ရုံးပတီသီး အစိမ်​းကို အတို့လုပ်ပြီး စားတတ်ရင် ဒီပို့ကို (လုံးဝ) ကျော်မသွားပါနဲ့ အရေးကြီးလို့ပါ ရုံးပတီသီး အစိမ်​းစားခြင်​း​လျော့ပါ ကျွန်တော် ရွာရောက်တော့ ရုံးပတီသီး စိုက်သည့် တောင်သူ တစ်ဦးမှ ပြောပြသဖြင့် ထပ်ဆင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရုံးပတီသီး ကို အစိမ်းတို့စားရတာ ကြိုက်သည်ဆိုက ရုံးပတီသီး ကို ဆားရည်ဖြင့် နာရီဝက်ခန့် စိမ်ပြီးမှ စားပါရန် အကြံပေးပါသည်။ ရုံးပတီသီး ကြိုက်သော ပိုးမွှား များတွင် လှေးပိုးသည် နှိမ်နင်းရန် အခက်ခဲဆုံးပိုးဖြစ်၏၊ အပင်ကို ဖျက်ဆီးသော ထိုပိုးသည် အကောင်မမြင်ရ၊ ဆေးမျိုးစုံ သုံးသော်လည်း ထိုပိုးကို မနိုင်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက တားမြစ်ထားသော အန္ဒိယ မှလာသည့် ဆေး တစ်မျိုးကို သုံးကြ၏၊ ထို ဆေး ကို … Read more
ထန်းရည် ကြိုက်သူအတွက် ထန်းရည်မှရရှိနိုင်သော အံ့မခန်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
January 2, 2021 by ApannPyay Media
ထန်းရည် ကြိုက်သူအတွက် ထန်းရည်မှရရှိနိုင်သော အံ့မခန်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ထန်းရည်ကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးများရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆက်သာသောက် လို့ပြောပါရစေလား။ ထန်းရည်က ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုများကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲသိချင်ရင်တော့ တူတူဆက်ဆွေးနွေး ရအောင်လား။ ထန်းရည်ဆိုတာက ထန်းသီးကနေရတဲ့အရည်မဟုတ်ပါဘူး။ ထန်ဖူးကနေရတဲ့အရည်ပါ။ ထန်းရည်ကို သောက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သောက်လာခဲ့တာ အရင်ကတည်းကပါ။ ထန်းရည်မှာ အချိုနဲ့အခါးဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ဒီထန်းရည်က သဘာဝဆေးတစ်ခုအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ထန်းရည်က pH ၈ ကနေ ၉ ရှိပါတယ်။ ထန်းရည်က ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ သောက်စရာတစ်ခုလို့ပြောပါရစေနော်။ ထန်းရည်ကနေ ဒီလိုအာဟာရဓာတ်တွေရနိုင်ပါတယ်။ ထန်းရည်မှာ အာဟာရဓာတ်အနေနဲ့ ဆူးခရို့စ်/ ပရိုတင်း/ Ascorbic acid/ အမျှင်ဓာတ်/ အမိုင်နိုအက်ဆစ်/ ဗီတာမင် C နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ထန်းရည်က သဘာဝလက်ဆောင်တစ်မျိုးပါ။ ထန်းရည်က ချိုပြီး အရသာရှိသလို … Read more
သင့်ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဒါတွေရှိနေရင်တော့ သေချာပေါက် သင့်ကို လာဘ်ပိတ်စေပါပြီ
သင့်ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဒါတွေရှိနေရင်တော့ သေချာပေါက် သင့်ကို လာဘ်ပိတ်စေပါပြီ စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရပညာအရစကြာဝဠာထဲမှာ အလိုအလျောက်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေရော လူသားတွေဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါမကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ – ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်မယ်။ – ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ်ပိတ် တာတွေ။ – ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကိုသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် – ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလို – ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ – ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ . . . . – ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ … Read more
သင်္ဘောသီးစားတာ ဒီလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရတာကို သိကြပြီလား
သင်္ဘောသီးစားတာ ဒီလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရတာကို သိကြပြီလား နံနက် ၈ နာရီ စားသုံးလျှင် – အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း အတွက် ကောင်းမွန် ပါသည်။ နံနက် ၉ နာရီ စားသုံးလျှင် – သွေးအဆိပ်ဖြစ်ခြင်းကို ကောင်းမွန်သည်။ သွေးသားကို သန့်စင် စေသည်။ နံနက် ၁၀ နာရီ စားသုံးလျှင် – အသည်း၌ ပူခြင်းကို ကောင်းမွန်ပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာ စေသည်။ နံနက် ၁၁ နာရီ စားသုံးလျှင် – အာသီးနာခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်းတို့ကို ကောင်းမွန်စေသည်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ စားသုံးလျှင် – နွယ်ချိုမှုန့်နှင့် တို့၍စားလျှင် အစာကြေစေသည်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ … Read more
ဒါကိုသိရင် ကြက်ဥခွံတွေကို လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး (မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့် အကျိုးရှိမယ်)
ဒါကိုသိရင် ကြက််ဥခွံတွေကို လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး (မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့် အကျိုးရှိမယ်) ဒါကိုသိရင် ကြက််ဥခွံလေးတွေကို လွှင့်ပစ်ပိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး …. ။ ကြက်ဥခွံွံတွေကို ပြန်ပြီး အသုံးပြုနိိုင်တဲ့နည်း(12)မျိုး ကြက်ဥဆိုတာ အာဟာရဓါတ််တွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ကြက်ဥစားပြီးရင် ကြက်ဥအခွံတွေကို လွှင့်ပြစ်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ ကြက်ဥခွံတွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ငါတော်တော်မိုက်မဲပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေးမိမှာ အမှန်ပါဘဲ။ ဒါကြောင့်မို့ အသုံးဝင်တဲ့ကြက်ဥအခွံတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ (၁) ခရမ်းချဉ်ပင်တွေကို သန်စွမ်းစေတယ် ဟုတ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်ပင််တွေကို ကြက်ဥခွံတွေက အကျိုးပြုပါတယ်။ကြက်ဥခွံတွေကို ခြေမွပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်ပင်ရဲ့ အမြစ်အနီးတွင်းတူးပြီး ထည့်လိုက်ရပါမယ်။ ကြက်ဥခွံဟာ ကယ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေ လိုအပ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ကို … Read more
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း (၇)မျိုး မျက်မှန်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျက်မှန်တပ်နေရသူတွေသာသိမယ်။ ကိုယ်နှင့်မခွာအမြဲဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲမျက်မှန်ကထိပ်ဆုံးပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းလေးကျိုးသွားလို့ ဆိုင်သွားပေးထားရင်တောင် တစ်ရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးက စာရေးသူကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါကြောင့်မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် မျက်မှန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတလည်းရပြီး အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အမှောင်ထဲမှာမျက်မှန်ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှ မီးကပျက်၊ မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ အနုမြူသော့ချိတ်ကို ကိုယ့်မျက်မှန်အိတ်ထဲချိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်တွဲချည်ထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲမှောင်နေတဲ့အခန်းဖြစ်ပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ရှာတွေ့သွားမှာပါ။ ၂။မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတဲ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းချောင်ကျတာကတော့ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်က ခပ်ပြေပြေဖြစ်ပြီး နားပေါ်ကချော်ကျလို့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါ မျက်မှန်ကိုင်းထိပ်ကို ရေနွေးပူပူထဲစိမ်ပြီး ပျော့လာတဲ့အခါ ဆွဲကွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ နားပေါ်က ချော်ကျတဲ့ပြသနာမရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ထပ်နည်းတစ်ခုကတော့ ကိုင်းထိပ်နားလေးတွေကို ခေါင်းစည်းကြိုးဗြောင်သေးသေးလေးနဲ့ ပတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါကလုပ်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။ ၃။မှန်မျက်နှာပြင် ရေငွေ့ဟပ်တဲ့အခါ YBS ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့မျက်မှန်သမားတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ။ … Read more
သပြုသီးကို ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဒီလိုချက်ပါ
သပြုသီးကို ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဒီလိုချက်ပါ သပြုသီး ဆေးဖက်ဝင်ခြင်း ( ၁ ) – အသည်းကျွတ်ခြင်း ၊အသည်းရောင်ခြင်း၊ရေဖျဉ်းနဲ့ အဖျဉ်းရောဂါ အမျိုးမျိုး၊ရင်ဝထိုးအောင့်သောရောဂါ. မောပန်းခြင်း၊အပူပြင်းထန်သော အဖျား ၊ချောင်းဆိုးရောဂါ၊အပူချောင်း၊ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊အပူလွန်အဖျား၊အဆိပ်သင့်သောအနာ၊ဒူလာ သွေးဝမ်း၊မီးယပ်သွေးဝမ်း၊သွားကိုက်သွားနာ၊ပွေးဝဲ၊နှင်းခူ၊အသည်းအဖျဉ်းရောဂါများအတွက်သပြေသီးနဲ့ ဝက်နံရိုး ဟင်းချိုကို ငရုပ်သီးမထည့်ပဲချက်စားပါ။ လူခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို အဓိက ဖယ်ရှားရသည့် အစိတ်အပိုင်းမှာအသည်းဖြစ်သည်။အသည်းရောင် အသည်းကျစ်ခြင်းများမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ သပြုသီးနဲ့ ဝက်နံရိုးဟင်းချို ချက်စားပါ ( ငရုပ်သီး လုံးဝမထည့်ရ) သပြုသီးမှည့် ရင့်ရင့် ၁ လုံး ဝက်နံရိုး. ၁၀ သား ဆီ အနည်းငယ် ကြက်သွန် အဖြူ အနီ ဆားသင့်ရုံ ရေသန့် ထည့်ပြီး ဆူရင်. အမြှောင်းလိုက် လှီးထားသော သပြုသီးများကိုထည့်ပြီးနူးလျင်ကုန်အောင်စားရပါမည်။ ( ၂ ) – … Read more
ဆူးပုတ်ပင် စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနည်းလေး
ဆူးပုတ်ပင် စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနည်းလေး ဆူးပုတ်ပင်စိုက်ပျိုးနည်းလေး ဆူးပုတ်ပင်ကစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းရတာလွယ်ကူပါတယ်၊ စိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်တစ်တောင်ခြားစိုက်ရပါမယ် ၊ အတန်းအနေထားကတော့ ဝင်ထွက်သွားလားကောင်းအောင်စိုက်ရပါမယ်။ တစ်ဧကကို အပင်တစ်သောင်းလောက်စိုက်လို့ပါပါမယ်။ စိုက်ကျင်းတူးတဲ့အခါမှာ တစ်ထွာအနက်၊ တစ်ထွာအကျယ်ဆိုရပါပြီ၊ ဘာမြေသြဇာမှထည့်စရာမလိုပါဘူး။ အကယ်၍ ထည့်မယ်ဆိုရင် ကျင်းကိုနက်နက်တူးပြီး ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ သို့မဟုတ် နွားချေးနှပ်ပြီးသားထည့်လို့ရပါတယ်။ အကိုင်းပျိုးပင်ရွက်နုထွက်ပြီးရင်လာပြီဆိုရင် နွားချေး သိုမဟုတ် ကြက်ချေးကိုအပင်အောက်ခြေမှာအတင့်တင့်ပုံပေးနိုင်ရင် ရွက်နုသစ်တွေမြန်မြန်ထွက်ပါပြီ။ မည်သည့်အပင်မျိုးမဆိုရေကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်၊မိုးတွင်းမှာတော့ရေလောင်းစရာမလိုပါဘူး။ နွေဘက်မှာတော့ ၃ရက်တခါ၇ရက်တခါစိုက်ပျိုးမြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးရေလောင်းပေးရပါမယ်။ စိုက်ပျိုးပြီး အညွန့်ထွက်ရင်ဖျတ်လို့ရပါပြီ၊ဆူးပုတ်ကအညွန့်ထွက်ကောင်းပါတယ်။အညွန့်ဖျတ်တဲ့အခါမှာပင်စည်နဲ့နဲနဲခွာပြီးဖျတ်ပေးပါ။သုံးလေးရက်တခါဖျတ်လို့ရပါတယ်။ ဆူးပုတ်တစ်ဧကကို တစ်လဝင်ငွေ ၆သိန်းရသိန်းလောက်ရပါတယ်။ ဆူးပုတ်ရွက်ကတောရော၊မြို့ပါကြိုက်နှစ်သက်ကျလို့စျေးကွက်လဲရှိပါတယ်၊စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဆူးပုတ်ကိုစီးပွာဖြစ်စိုက်ပျိုးတော့မယ်ဆိုရင် စျေးကွက်ရောင်းအားရရှိနိုင်မည့်အပေါ် ခြင့်ချိန်ပြီးစိုက်ပျိုးကြပါ။တောင်သူများစိုက်ပျိုးဝင်ငွေများတိုးနိုင်ကြပါစေ။ AungKoShin ဆူးပုတ္ပင္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းေလး ဆူးပုတ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းေလး ဆူးပုတ္ပင္ကစိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းရတာလြယ္ကူပါတယ္၊ စိုက္တဲ့အခါမွာတစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္တစ္ေတာင္ျခားစိုက္ရပါမယ္ ၊ အတန္းအေနထားကေတာ့ ဝင္ထြက္သြားလားေကာင္းေအာင္စိုက္ရပါမယ္။ တစ္ဧကကို အပင္တစ္ေသာင္းေလာက္စိုက္လို႔ပါပါမယ္။ စိုက္က်င္းတူးတဲ့အခါမွာ တစ္ထြာအနက္၊ တစ္ထြာအက်ယ္ဆိုရပါၿပီ၊ ဘာေျမၾသဇာမွထည့္စရာမလိုပါဘူး။ … Read more